H.E Ko Ko Latt handing-over of the ASEAN-Riyadh Committee Chairman from Malaysia Ambassador Zainol Rahim Zainuddin – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
H.E Ko Ko Latt handing-over of the ASEAN-Riyadh Committee Chairman from Malaysia Ambassador Zainol Rahim Zainuddin
The Ambassador of the Republic of the Union of Myanmar in Saudi Arabia H.E Ko Ko Latt on 15-2-2018 in 2018 to turn the ASEAN-Riyadh Committee Chairman Saudi Arabian national Malaysian Ambassador H.E. Accept transfer from Zainol Rahim Zainuddin. Baan Thai Restaurant Al Urubah Road, Riyadh ceremony held. The ceremony in Riyadh of the ASEAN ambassadors, smart wife and Deputy heads of Mission on attended. Saudi Arabia, the only ASEAN member of eight countries. These countries are Myanmar, Malaysia, Brunei, Singapore, Vietnam, Thailand, Philippines and Indonesia transparent. ASEAN-Riyadh Committee was formed in 19-6-2000. Myanmar from 2011 and 2018, atatime, turning once. As chairman of ASEAN ASEAN-yard Committee-yard games, Social and Cultural Committee, ASEAN-Riyadh consists of the Women’s Committee.
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုလတ်သည် ၁၅-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံ-ရီယာဒ်ကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Zainol Rahim Zainuddin ထံမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကို Baan Thai Restaurant Al Urubah Road, Riyadh တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရီယာဒ်မြို့ရှိ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံမတ်ကြီးများ၏ ဇနီးများ၊ သံရုံးဒုတိယ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၈)နိုင်ငံသာ ရှိပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံများမှာ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံ-ရီယာဒ်ကော်မတီကို ၁၉-၆-၂၀၀၀ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်နှင့် ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ အာဆီယံ-ရီယာဒ်ကော်မတီတွင် အာဆီယံ-ရီယာဒ် အားကစား၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ၊ အာဆီယံ-ရီယာဒ် အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီတို့ ပါဝင်ပါသည်။